Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6 Fanadihadiana mifandraika amin'ny loharano lehibe
Ny fijerena ny fanadihadiana amin'ny loharanom-baovao lehibe dia ahafahanao mamorona tombanana izay tsy ho vita amin'ny loharanom-baovao tsirairay.
Ny ankamaroan'ny fanadihadiana dia tsy misy afa-tsy ezaka manokana. Tsy mifankatia izy ireo, ary tsy manararaotra ireo data hafa rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Hiova izany. Maro loatra ny zavatra azo avy amin'ny fampidirana ireo angona fanadihadiana amin'ny loharanom-baovao lehibe voaresaka ao amin'ny toko faha 2. Amin'ny fampifangaroana ireo karazana data roa ireo, dia matetika azo atao ny manao zavatra tsy vitan'ny tsirairay.
Misy karazana fomba roa samihafa ahafahana mifandray amin'ny loharanom-baovao lehibe. Amin'ity fizarana ity, dia hamaritra fomba roa mahasoa sy miavaka aho, ary hiantso azy ireo izy ireo hanangona fangatahana sy hanamafisana ny fangatahana (faha-3.12). Na dia hanazava ny fomba fijery tsirairay amin'ny ohatra amin'ny antsipiriany aza aho, dia tokony hiaiky ianao fa ireo no fomba mahazatra azo ampiasaina amin'ny karazana fanadihadiana isan-karazany sy karazana angona lehibe. Ankoatra izany, tokony hojerentsika fa ny tsirairay amin'ireo ohatra ireo dia azo jerena amin'ny fomba roa samihafa. Rehefa misaintsaina ny hevitra ao amin'ny toko voalohany, misy olona sasany dia hijery ireo fandinihana ireo ho ohatra avy amin'ny tahirin-kevitra "custommade" hampitombo ny angon-drakitra "readymade", ary ny hafa dia hijery azy ireo ho ohatra amin'ny "data readymade" goavana manatsara ny "custommade". Tokony ho afaka hahita ny fomba fijery roa ianao. Farany, tokony hojerentsika ny fomba fampiharihariana ireo ohatra ireo fa ny fanadihadiana sy loharanom-baovao lehibe dia fanampiana fa tsy solon'anarana.
Sary 3.12: Fomba roa hampiarahana ny loharano lehibe sy ny angona fanadihadiana. Amin'ny fangatahana nangatahana (fizarana 3.6.1), ny loharanom-baovao lehibe dia manana lanjany mahaliana ary ny tahiry fanadihadiana dia manangana ny sehatra ilaina amin'izany. Amin'ny fangatahana am-bavany (fizarana 3.6.2), ny loharanom-baovao lehibe dia tsy manana lanjan'ny fahalianana, fa ampiasaina hanamafisana ny angona fanadihadiana.